PressReader - Ilanga: 2017-11-09 - Uvalo ngempi yezizwe ezibangayo
Uvalo ngempi yezizwe ezibangayo
Kubhuntshe umhlangano ngenxa yezinsongo
KUXABENE ubendle eDukuduku, eMtubatuba, ogwini olusenyakatho yeKwaZulu-Natal, njengoba izizwe ezimbili, esakwaMthethwa KwaMbonambi (seNkosi Ntemba Mthethwa) nesakwaMkhwanazi KwaMpukunyoni (seNkosi Mzokhulayo Mkhwanazi), zikluluzana ngamehlo ngenxa yombango wendawo - osekwenze izakhamizi zadliwa yingebhe.
Kubikwa ukuthi sishubile isimo kule ndawo njengoba kuze kwadingeka ukuba kungenelele amaphoyisa ayoqapha isimo komunye umhlangano obekumele ube ngeSonto, wagcina ubhuntshile ngenxa yokwesaba ukuthi kungase kusuke udungunyane olungadlula nemiphefumulo.
Kubikwa ukuthi sesiside isikhathi kunomdonsiswano wokuthi indawo yaseDukuduku ingaphansi kukabani phakathi kwala makhosi. Kubikwa ukuthi ngisho uMnyango wezokuBusa ngokuBambisana nezoMdabu KwaZulu-Natal usungenelele kulolu daba kodwa kaluxazululeki.
ILANGA lihabule ngomthombo walo ukuthi isimo sithande ukuba muncu kakhulu kule mpelasonto eyedlule njengoba bekulindeleke ukuba kube nomhlangano obubizwe yiNkosi Mthethwa, ogcine ubhuntshile ngenxa yovalo ngezokuphepha.
Umthombo uthi kuze kwadingeka ukuba amaphoyisa angenelele njengoba ebechithiwe ehholo laseMdonini lapho bekulindeleke ukuba umhlangano ube khona.
Uthi umhlangano ubhuntshiswe yizinsolo zokuthi kunamabutho akwaMkhwanazi abehlose ukuyohlasela abakwaMthethwa besabhunga ehholo.
“Isimo sibi kakhulu kule ndawo, ngoLwesine olwedlule bekunomhlangano obekukhona kuwona abomnyango bezozama ukuxazulula lo mbango. Lo mhlangano kawuphelanga kahle njengoba iNkosi Mkhwanazi ivele yawuduba, yaphuma yahamba kusaxoxwa.
“Ngalo uLwesine ntambama, kumenyezelwe ngombhobho ukuthi wonke amabutho mawaphelele enkantolo yeNkosi Mkhwanazi kunomhlangano ophuthumayo.
“Siyasola ukuthi kulo mhlangano yilapho kuphume khona igama lokuthi kuyohlakazwa umhlangano wangeSonto (wabakwaMthethwa)‚” kusho umthombo.
UMnu Sokhaya Ncube oyinduna yeNkosi Mthethwa, uthe: “Yebo, kuliqiniso ukuthi kukhona abebememezela ukuthi kuzohlaselwa kulo mhlangano obuzoba ngeSonto. Amaphoyisa aseluleke ngokuthi siwuhlehlise ngezizathu zokuphepha,” kusho uMnu Ncube.
UMnu Almon Sithole, oyinduna yabaKhwanazi, uthe lo muntu osusa umbango ngendawo kakuyona inkosi yakwaMthethwa kodwa ngumfana wayo, uVini Mthethwa. Uthi isizathu esenze iNkosi Mkhwanazi ihambe ngoLwesine, wukuthi ikubeke kwacaca ukuthi yona kayizimisele ukukhuluma nomfana wenkosi ekubeni uyise ekhona futhi ulwazi kahle udaba lwaseDukuduku.
“Le ndawo okukhulunywa ngayo kuyaziwa ukuthi ngeyeNkosi Mkhwanazi. Ngisho inkosi ezala lo mfana iyazi futhi yakuvuma phambilini ukuthi le ndawo kayikho ngaphansi kwakwaMthethwa. Siyethuka uma sekuqhamuka umfana esesusa uthuthuva oluzogcina luqhathe abantu isidingo singekho,” kusho yena.
Umphathi wesiteshi samaphoyisa aseMtubatuba, uCol Mhluleli Mngomezulu, ukuqinisekisile ukuthi bacele ukuba umhlangano obuzoba ngeSonto uhlehle ngenxa yezinsolo zokuthi kunabebehlela ukuhlasela.
Uthi lolu daba uselubikelile iziphathimandla ukuze zizongenelela.
Uveze ukuthi kunomkhondo abawulandelayo mayelana nezinsolo zohlu lwabantu okuthiwa bazobulawa.
Okhulumela umnyango wezokuBusa ngokuBambisana nezoMdabu KwaZulu-Natal, uMnu Msawakhe Mayisela, uthe ubukhona umhlangano obuphakathi kwezikhulu zomnyango namakhosi ngodaba lwaseDukuduku.
“Siwumnyango senza konke okusemandleni ukuba kube nozinzo phakathi kwamakhosi womabili. Sikwenza lokhu sibambisene nomnyango wezokuphepha komphakathi. Sisazoba nawo futhi omunye umhlangano mayelana nalolu daba.
“Siyakhuleka futhi emakhosini womabili nabantu bawo ukuba sisebenze ngokubambisana ukuze kungabi nezithiyo emkhankasweni wethu siwuhulumeni wokuhambisa izinhlelo zentuthuko emiphakathini ethintekayo,” kusho uMnu Mayisela.
INkosi Mkhwanazi ivele yawuduba, yaphuma kusaxoxwa.